Hammarsjöleden | Tsidiho i Hultsfred
Home » Jereo & ataovy » Activities » mirenireny » Hammarsjöleden
Manomboka amin'ny zaridaina Kalvkätte ny làlana, izay toerana tena tsara amin'ny fivoahana amin'ny làlambe 23 mankany amin'ny foibe Hultfred. Apetraho amin'ny fijanonan'ny fiara lehibe ny fiaranao, ary midira mahitsy mankamin'ny zaridaina mahafinaritra alohan'ny hanombohanao ny dianao. Misy safidy lehibe isan-taona, zaridaina ahitra ary zaridaina raozy kely.
Mandehandeha amin'ny lalana sy lalan-tany lehibe ianao mandra-pahatongan'ny toerana fialamboly Stora Hammarsjön.
Ny tapany farany amin'ny làlana dia mamaky fitsinjaram-boahary. Tany havoana somary be tendrombohitra miaraka amin'ny ala kesika taloha. Ny lalan'i Hammarsjö dia mifarana amin'ny Stora Hammarsjön izay ahafahanao manohy mandehandeha manodidina an'i Hammrsjön na mety hijanona hisotro kafe sy handroboka ao Hammarsjön.
Tongasoa eto amin'ny natiora!
Noho ny zon'ny fidirana imasom-bahoaka, afaka mivezivezy malalaka amin'ny endrika soedoà ny rehetra. Vakio bebe kokoa momba ny zon'ny fidirana ampahibemaso ao amin'ny tranonkalan'ny Sampan-draharaha miaro ny tontolo iainana any Soeda
Ny zavatra tsara hoentina miaraka aminao mandritra ny dia iray dia mety ho rano, petaka, sarintany, finday, sosona akanjo ba fanampiny ambonin'ny sosona sy ba kiraro.
Ny alika dia tsy tokony hovahana any an'ala, eo anelanelan'ny 1 martsa sy 20 aogositra.
Ny fihazana moose dia atao amin'ny tapaky ny volana oktobra.
Mitondrà kitapo ho an'ny fako sy ambiny
Ampahafantaro ny tenanao momba ny fandrarana ny afo amin'izao fotoana izao. Amin'ny tranga mahazatra dia afaka mamorona afo ianao fa aza mirehitra amin'ny vato na vato ary vonoina tsara ny afo.
• Ao amin'ny zaridainan'i Kalvkätte dia misy fijanonana ary mandritra ny volana fahavaratra dia misy trano fidiovana sy rano koa.
• Ao amin'ny faritra Lilla Hammarsjön dia misy faritra fivanginan-drivotra sy barbecue kely.
• Ao Åkebosjön dia misy faritra hipetrahana misy latabatra, toerana filomanosana.
• Ao amin'ny Stora Hammarsjön dia misy fijanonana, trano fidiovana ivelany, famakiana rivotra, faritra barbecue, toby natiora, faritra lomano, fandroana mafana ary sauna.
Hammarsjöleden ao Gaia
Hammarsjöleden ao amin'ny Tetikasa Hiking
Hammarsjöleden ao amin'ny Outdooractive
Hammarsjöleden ao amin'ny Sarintany voajanahary
Hammarsjöleden ao amin'ny Wikiloc
4 amin'ny 5.0
Hevitra 9 ao amin'ny Google
Takelaka misy sary sy sarintany
5/5 herintaona lasa izay
Làlana mahafinaritra izay ahafahanao miaina ny fiainana voajanahary samihafa. Tonga lafatra ho an'ny olona rehetra hitantsika fa ataovy amin'ny fomba milamina.
5/5 2 taona lasa
Hammarsjöleden dia làlana mahafinaritra tsy mampino. Tsara marika io, misy dabilio manamorona ny arabe sy famantarana fampahalalana milaza momba ireo mari-trano hitanao.
4/5 2 taona lasa
Làlana mahafinaritra mandeha
3/5 2 taona lasa
Làlana fitsangantsanganana rehetra